Ogaden News Agency (ONA) – Meles muxuu uga caraary khudabadii uu jeedin lahaa machadka Thabo Mbeki
Meles muxuu uga caraary khudabadii uu jeedin lahaa machadka Thabo Mbeki
Laga bilaabo bilowgii sanadkan horaantisii waxaa socday warar sheegaya in Meles zinaawi imaanayo wadanka South Africa. Warar aan lagu kalsoonayn ayaa waxay tibaaxayeen in Meles Khudbad ka jeedindoono Machadka Hogaaminta Africa ee Thabo Mbeki ( Thabo Mbeki African Leadership Institute ).
Machadkan wuxuu leeyahay sanad khudbadeed taasoo uu jeediyo Madaxweyne wadan African ah. Waxaa labadii sano ee uu jiray Machadkan khudbad ka jeediyay ninka machadka loogu magacdaray ee Thabo Mbeki, madaxweynihii hore ee South Africa iyo madaxweynihii hore ee Tanzania.
Hadaba sanadka waxa ku qornaa Meles Zinawi oo jeedin lahaa khudbad loogu magacdaray “ Africa in the New World Order: Challenges and Opportunities”: Africa siday u raaci lahayd Nidaamka Dunida Cusub; hardanka iyo fursadahaba .
Waxyaabaha lala yaabay waxaa ka mid ahaa inuu Males Zinawi uu machadka ku khasbay in aan la siidayn Ogaysiis ku saabsan khudbadiisa wakhti hore, isagoo ka cabsi qabay in ay ogaadaan dadka ku hoos dulman. Iyadoo codsigiisa la tixgalinayoayaa waxaa la sheegay wakhtiga la qabanayo kulanka iyo goobta kudbada laga jeedinayo, hase yeeshe la qariyo qofka jeedinaya waxaana taariikhda laga dhigay 25/05/2012.
Kadib kolkii ay jaaliyadda si hoose u ogaatay qofka jeedinaya khudbada ayaa waxay qaaday dadaalo is daba joog ah (1) waxay xooga saartay in ay hesho jaaliyaddu Ogolaansho Bananbax iyo
(2) in ay caasumad ka hesho Goobta uu khudbada ka jeedinayo .
Isla markiiba waxay jaaliyadu wargalisay policeka wadanka, kaas oo jaaliyadda siiyay tilmaamaha laga rabo. Waxay jaaliyadu gudo gashay codsiyo is-garabsocda oo ku sababsan bananbax iyo casuumad.
Markii police ogaaday in jaaliyada Ogadeenya ee Konfur Afrika ay ka go’an tahay in ay qabato bananbax ayaa waxaa laga wargaliyay machadkii howshan ay ku socotay, waxaana dhacday in maalma kadib machadku badalay taariikhdii kulanka waxaana la soo hormariyay maalin oo laga dhigay 24/05/2012.
Arintaas isbadbadalka ah waxay sababtay jaaliyadda oo markii hore rabtay inay Banaanbaxa ku qabato goobta uu ka khudbaynayo, ay u wareejiso bananbaxeedii Safarada gumaysiga oo la filayay in uu yimaado.
Waxaa haddaba la sii dayay 21/05/2012 jadwalkii shirka machadka uu kujiro Diigyacab Mels Zinawi. Jaaliyadu waxay ku guulaysatay inay hesho casuumadii shirka taas oo xubno dhowr ah naloogu ogalaaday.
Xaaladu markay halkaasi martay waxaa ay jaaliyadu qaadatay talaabo kale oo ahayd qorshihii ugu danbeeyay marka ay talo faraha ka baxdo. Madaamo la waayay bananbaxa waxaa la qaatay go’aan ah in goobta loo diro koox kale oon ahayn kuwa ka qayb galaya banaabaxa. Waxaay kooxdan qaadatay boodhadh waaweyn iyo waraaqo farabadan. Waxay qaybiyeen waraaqihii ilaa ay ku dhameeyeen kadibna qolyihii jaamacada nabadgalyada u qabilsanaa ay isku dhacaan.
Kooxdii gashay goobta waxay ogaadeen in uunan Meles imaanin goobta cabsi uu ka qabo in waji gabax laabad uu ka qabsado wadanka south Africa isagoo kala kulmay mudahaaradyo badan oo ka dhan ah.
Waxaad hoosta ka eegta documents kala cadeeynayaa isbadalada lagu sameeyay dadka ka qaygalayay kulan .
1-Former president of mozambique
2-Former president of cape verde pedro pires
3-Petron of tmf former president of south africa thabo Mbeki
4- former president of Nigeria opasanjo
5-Prof; chris landsberg university of johannisburg
6-Former president of Nigeria olusengun obasanjo
7=Prof n barney pitana member of the tmf board of trustees
Qaar ka mid ah sawirada madaxda ka hadashay maanaan helin iyadoo ay machadku soo saartay. Warqadani waxay cadaynaysaa cida ka hadashay iyo inuuna Meles ka qayb gelin.
Waxaana uu sheegay Mr. Thabo Mbeki arimo ka jira dalkiisa awgood inuuna ka qayb gelaynin Meles Zinawe.
Our demonstration against The devil monkey”Zenawi”and his mecenary and renegades had gone beautiful,and to show him our power in and out was also blessed.we had really avoided him from lecturing at the University.because Dictators have no place in the new world.let me all my comrade in the struggle”viva O.N.L.F,VIVA”